ဘိုင်ယန်မှထွက်ခွာတော့မယ့် လီဝန်ဒေါစကီးနှင့် အပြိုင်လုကြမည့် စီရီးအေ နှင့် ပရီးမီးယားလိဂ် ဗိုလ်ကျားသေနတ်များ.... - YTV Channel
Home | Sports | ဘိုင်ယန်မှထွက်ခွာတော့မယ့် လီဝန်ဒေါစကီးနှင့် အပြိုင်လုကြမည့် စီရီးအေ နှင့် ပရီးမီးယားလိဂ် ဗိုလ်ကျားသေနတ်များ….
ဘိုင်ယန်မှထွက်ခွာတော့မယ့် လီဝန်ဒေါစကီးနှင့် အပြိုင်လုကြမည့် စီရီးအေ နှင့် ပရီးမီးယားလိဂ် ဗိုလ်ကျားသေနတ်များ….
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းမှ ရာသီကုန်မှာ စာချုပ်သက်တမ်းပြည့်တော့မှာမို့ ထွက်ခွာလာတော့မယ့် လီဝန်ဒေါစကီး ကိုတော့ ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ စီရီးအေနှင့် ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်များက ဗိုလ်ကျားသေနတ် ဆွဲရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်....
အသက်ကြီးပေမဲ့ မပျက်စီးသေးတဲ့ လီဝန်ဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဆီကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲစုံ ၃၇၅ ပွဲမှာ ၃၄၄ ဂိုးထိသွင်းယူထားတဲ့ ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှုး တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်....ဘလွန်ဒီအော ဆုအတွက်လဲထိပ်ဆုံးမှ ရေပန်းစားနေသူဖြစ်ပြီး သူထွက်ခွာလာတဲ့နှင့်အမျှ ခေါ်ယူမယ့် အသင်းကြီးများကလဲ တန်းစီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်...ဘာကာနဲ့မန်ယူတို့မှလဲ ခေါ်ယူရန်ညှိနှိုင်းထားပြီး အခြားသောအသင်းကြီးများကလဲအပြိုင် လိုချင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်....
လီဝန်ဒေါစကီးဟာ ယမန်နှစ်က ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းတွင် ၃၄ ပွဲသာကစားထားပြီး ၃၅ ဂိုးသွင်းဂိုးများနှင့် ဖန်တီးမှုသုံးကြိမ်အထိ ရယူပေးထားတဲ့ကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်...ဘိုင်ယန်တိုက်စစ်ကို (၈) နှစ်တာဦးဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ ရှစ်နှစ်တာလုံးကောင်းမွန်စွာကစားပေးနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်...၂၀၂၀-၂၁ ခုနှစ်မှာလဲ ဘလွန်ဒီအောဆုအတွက်ရည်မှန်းထားတာဖြစ်ပြီး အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့် လွဲချော်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်....ယခုနှစ်မှာလဲ အသင်းကြီးတော်တော်များများက ကမ်းလှမ်းထားပြီးအသင်းပြောင်းမယ့်အပေါ် ပြောကြားချက်များ သို့လောသို့လောနှင့် မရေရာသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်....ဒါကြောင့် ဘယ်အသင်းက ဗိုလ်ကျားသေနတ် ဆွဲရာမှာ အနိုင်ရရှိသွားဦးမလဲဆိုတာ နောက်လာမယ့်သတင်းတွေမှာ စောင့်ကြည့်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်...
ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရော ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Legend ကြီးကို ဘယ်အသင်းမှာမြင်စေချင်လဲဆိုတာလေးကို ကွန့်မန့်လေးမှာပြောပြပေးခဲ့ပါဦးနော်......